VPSA Vacuum Kwezvokudya Nemiti jenareta - China Hangzhou Poly Air Separation Equipment
Kushanda nhungamiro VPSA kumanikidzwa famba adsorption okisijeni jenareta 1. The huru zvinoriumba mudenga vari senitrogen uye oxygen. Nitrogen uye neoxygen iri mumhepo dzakasiyana adsorption waivako pamusoro zeolite (ZMS) pa ambient tembiricha (okisijeni anogona nyura kuburikidza senitrogen). Nitrogen pamusoro zeolite samolecular nomusero adsorption kugona kunopfuura okisijeni (senitrogen Ion uye samolecular nomusero pamusoro simba simba), apo mhepo nevamwe ezvinhu ane zeolite samolecular nesefa adsorbent adsorptio ...
Kushanda nhungamiro VPSA kumanikidzwa famba adsorption okisijeni jenareta
1. huru zvinoriumba mudenga vari senitrogen uye oxygen. Nitrogen uye neoxygen iri mumhepo dzakasiyana adsorption waivako pamusoro zeolite (ZMS) pa ambient tembiricha (okisijeni anogona nyura kuburikidza senitrogen). Nitrogen pamusoro zeolite samolecular nomusero adsorption kugona kunopfuura okisijeni (senitrogen Ion uye samolecular nomusero pamusoro simba simba), apo mhepo nevamwe ezvinhu ane zeolite samolecular nesefa adsorbent adsorption mubhedha, senitrogen nokuda samolecular nomusero adsorption, zvishoma okisijeni nokuda adsorption, wevasungwa uye ichayerera mu gasi chehupenyu adsorption mubhedha, yakachena uye senitrogen kuparadzana kuti oxygen. Kana samolecular nomusero adsorbs senitrogen kuti saturation, mhepo iri akamira uye kwokudzvinyirira kwomunhu adsorption mubhedha ipfupi. The senitrogen yokuita zvinoitwa samolecular nomusero anoongororwa uye samolecular nomusero iri regenerated uye anogona kushandiswazve. The okisijeni inogona kugadzirwa akaramba nokuchinja pakati adsorption mibhedha miviri kana kupfuura.
The Kubika kurehwa okisijeni uye senitrogen riri pedyo, uye vaviri vari zvakaoma kusiyanisa. Naizvozvo, chete kumanikidza famba adsorption okisijeni nokugadzira mudziyo anogona kuwana 90-95% okisijeni (the polar kunaka wevasungwa reokisijeni iri 95,6%, uye vamwe ndiyo argon). Tichienzanisa cryogenic mhepo kuparadzana Unit, ekupedzisira anogona kubereka zvinopfuura 99,5% yakachena wevasungwa.
1. adsorption mubhedha kwokudzvinyirira famba adsorption mhepo kuparadzana okisijeni chirimwa anofanira ane mbiri oparesheni matanho; Adsorption uye kwemupfungwa. Kuti vawane chigadzirwa gasi dzose, adsorption mibhedha anopfuura maviri anowanzoshandurwa kuiswa mune okisijeni rokuita zvokushandisa, uye vamwe ebetsero matanho anodiwa vari akasiyawo kubva nemaonero simba zvinodyiwa uye isimbe. Mumwe adsorption mubhedha kazhinji anofanira kuenda kuburikidza matanho akadai adsorption, decompression, cleaning kana decompression patsva, Flushing yokutsiva uye kunyange kufurirwa wedzera, uye akadzokorora kushandiswa nguva nenguva. Panguva iyoyowo, mumwe adsorption mubhedha uri zvakasiyana oparesheni matanho. Kudzorwa PLC, kushanda anoverengeka adsorption mibhedha zvinogona chikwata uye vakadzungairira ari matanho, saka kuti kumanikidza famba adsorption mudziyo anogona kumhanya zvakanaka uye kuwana chigadzirwa gasi dzose. Nokuti chaiko kuparadzana muitiro, zvimwe chero zvinoumba mudenga anofanira kunzi. The adsorption inokwana carbon dioxide inobvisa uye mvura pamusoro zvatinosiita adsorbent kazhinji zvikuru kupfuura senitrogen uye okisijeni, izvo zvinogona kubviswa nokuzadza nyika adsorption mubhedha akakodzera adsorbent (kana adsorbent okisijeni rokuita pacharo).
Kuwanda adsorption shongwe hunodiwa kuti okisijeni Kugadzirwa mano kunoenderana pamwero reokisijeni kugadzirwa, adsorbent kuita uye muitiro magadzirirwo. Nokushanda kugadzikana multi-shongwe oparesheni achiri nani, asi midziyo mari achiri kumusoro. Kuitika ndiko kushandisa zvikuru vakarongeka okisijeni sorbent kurerutsa uwandu adsorption shongwe uye kushandisa pfupi uchishandisa nguva kuvandudza kunyatsoshanda pamusoro chikwata uye kuponesa mari rukuru sezvinobvira.
1. Simple midziyo kwacho
2. chikero reokisijeni Kugadzirwa riri pazasi 10000m3 / h, uye simba zvinodyiwa dererei uye mubhizimisi iduku;
3. Huwandu mapurani iri diki, uye nguva mudziyo chokugadza rakapfupika kupfuura cryogenic mudziyo;
4. Low midziyo kushanda nokuchengetedza mari;
5. The mudziyo ine mukuru mwero kushandisa michina ichishanda, yakakodzera uye kurumidza kuvhura uye kumisa, uye vashoma dzaishandisa;
6. mudziyo une simba kushanda isimbe uye yakakwirira yakachengeteka;
7. Simple mashandiro, uye zvikuru nhengo vose kubva pose mukurumbira vagadziri;
8. Zvinhu okisijeni samolecular sieves pamwe nani kuita uye upenyu basa refu;
9. Strong operative mukana wokushandiswa (nani mutoro mutsetse nokutsanya kutendeuka nokukurumidza).
Saizi 1. Product: 100-10000nm3 / h
2. Kwezvokudya Nemiti kuchena: 90-94% kana mukuru, izvo zvinogona kugadziridzwa mukati 30-95% siyana maererano User zvinodiwa.
3. Simba kunwa reokisijeni kugadzirwa; kana yakachena kuchena iri 90%, simba kuparadzwa dzikwanise yakaisvonaka okisijeni 0.32-0.37kwh / Nm3
4. Kwezvokudya Nemiti kumanikidzwa: hapana kupfuura 20kpa (zvinogona pressurized)
5. Simba: kupfuura kana kuenzana 95%
Previous: Psa Kwezvokudya Nemiti jenareta
Next: ZBN Nitrogen jenareta
Automatic Psa Onsite Kwezvokudya Nemiti jenareta
Compact Medical Psa Kwezvokudya Nemiti jenareta
Ichiputswa Kwezvokudya Nemiti jenareta
Ichiputswa Kwezvokudya Nemiti Nano Bubble jenareta
Home Kwezvokudya Nemiti jenareta
Industrial Kwezvokudya Nemiti jenareta
Liquid Kwezvokudya Nemiti jenareta
Okisijeni jenareta For Cylinder
Okisijeni jenareta For Fish Kurima
Okisijeni jenareta Medical
Okisijeni rehydrogen jenareta
Okisijeni Plant Psa okisijeni jenareta
Pusa Kwezvokudya Nemiti jenareta
Zeolite Molecular nesefa Kwezvokudya Nemiti jenareta
ZBO Kwezvokudya Nemiti jenareta